Beerka ka ogsooni ( Xaaji Gabay-Xaddi )
Inkasta oo sidii la rabay aan diirka looga qaadin, haddana markaynu eegno inta aynu hayno ee suugaan ah , waxaynu garowsanaynaa in ay Soomaalidu leedahay murti badan oo meel sare gaadhsiisan; murti bad ah, oo tix iyo tiraabba haddii loo kuurgalo aan qaybaheeda si hawl yar looga dhammaan karayn.
Gabayga oo ka mid ah jaadadka maanso ee ay xikmadda, mahadhada iyo waayo'aragnimada Soomaaliyeed ku dhan tahay ka ugu miisaanka culus, ayaa waxa uu waayadii hore kaalin sare kaga jiray, ilaa imikana door weyn ku leeyahay nolosha bulsho-weynta Soomaaliyeed.
Qoraaga sare ee Cabdi Yuusuf Ducaale "Boobe", ayaa waxa uu qoraalladiisa midkood ku sheegay in Lewis iyo Andrzejewski oo ah aqoon-baadheyaal ku xeeldheer Taariikhda iyo Suugaanta Soomaaliyeed ay 1994kii qoreen: in uu gabaygu kaalin mudan kaga jiro dhaqankeenna, lana wada daneeyo; in xirfaddiisu tahay wax la wada jecel yahay, isla-markaana aynu karti iyo awoodba u leenahay; iyo in dhaxalka suugaaneed ee dadkeennu uu yahay xoog nool, oo ku taxan dhalanrogga joogtada ah , ee ku socda nolosha bulshooyinkeenna.
Halkaas waxaynu ka garanaynaa in Soomaalida marka laga tago, ay xataa shisheeyuhu qirsan yihiin in ay suugaanteennu tahay xoog muhiim ah, oo xumaan iyo samaanba nolosha dadkeenna raadad waaweyn ku dhiga; raadadkaas oo muuqan kara xilli kasta oo la joogo.
Haddaba waxaynu halkan ku soo bandhigaynaa Gabay aad iyo aad u qiime badan, oo aan inagu cusbayn, hase ahaatee suugaanta Soomaalida meel sare oo lama-illoowaan ah ka galay. Waa gabaygii caanka ahaa , ee uu halkudhiggiisu ahaa "Beerka ka ogsooni", uuna tiriyey Eebbe ha u naxariistee abwaankii weynaa ee Xaaji Gabay-Xaddi , oo haddii aanan gefsanayn aan filayo inuu daba-yaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ama horraantii qarnigii tagay degi jiray Hawd ama gobolka maanta loo yaqaan Togdheer.
"Sow godobi surinkaad martoba, sabab qarsoon ma aha
Sow nabadi gogoshaada ood sida uun ma aha"
Labadaa beyd ee gabayga ah, waxaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen maansooyinkii qiimaha lahaa ee uu tirin jiray abwaanku, dadkuna aadka u jeclaayeen.
Xaaji Gabay-Xaddi maanta suugaan badan kama hayno, hase ahaatee marka aynu dhuuxno tixihiisa inta aynu ka hayno, waxaa malaha qasab inagu noqonaysa in aynu qirno in uu Xaajigu ka mid ahaa abwaannadii Soomaaliyeed ee ay suugaantoodu qiimaha sare lahayd, loona han-weynaan jiray . Waxa aynaan ka fursanayn in aynu sheegno in maansada abwaanku xagga tayada sare iyo laxaadka murtiyeedba ay kala mid tahay maansooyinkii Salaan-Carrabey, Cali Jaamac Haabiil, Ina Jadeer, Gammuute, iyo Maxamed Nuur Fadal. Raggaas oo ahaa raggii casriyadoodii maansooyinka Soomaalida hoggaanka u hayey, dadweynuhuna ay afkooda ka dhawri jireen xikmad aan duugoobayn, ilaa inta ay Soomaali nooshahayna aan macaankeeda laga xiisa-dhacayn
Buugaagtii suugaanta ee dugsiyadii dalka manhajka u ahaan jiray mid ka mid ah, ayaa waxaa lagu qoray in Xaaji Gabay-Xaddi abwaannimada marka laga tago uu ahaa Garyaqaan, uuna ka mid ahaa niman guurti ah, oo dadka u garnaqi jiray.
Haddaba si ay wax u dhaceenba, waxaa la sheegay in maalin maalmaha ka mid ah, uu abwaanka qaddar asiibay, jabniinna uu lug ka gaadhay. Haddaba rag rajo kama idlaatee, inkastoo wanaaggii uu abwaanku rajeynayay ee uu mudnaa la mariyey, haddana waxaa dhacday in ay dadkii dhawr qaybood u kala baxeen.
Laba bulsho oo uu abwaanku beryahaa ka hor u garnaqay, ayaa qoladii garta laga helay sida la sheegay ay ku diirsatay dhibtii abwaanka soo gaadhay, sida gabayga ka muuqatana ay "Baga" tiri. Halka qoladii kale wanaag iyo waxtar intii karoonkooda ahayd ay la garab joogsadeen. Dadkii kale ee abwaanka soo booqan jiray muddadii uu jiifay qaarbay booqashadoodu daacad ahayd, qaarna waxaa booqashadooda ku hoos lammaanaa - sida ereyga "burunji" ee gabayga ku jira aynu ka dhadhansanayno - dano kale. Qaarbaa dhul shisheeye ku maqnaa oo fursaddu u saamixi weyday in ay abwaanka guurtida ah soo booqdaan, hase ahaatee halkaa kala jiray, samona la jeclaa.
Haddaba tixdan "Beerka ka ogsooni" ee cajiibka ah, ayaa waxa uu abwaanku si farshaxannimo, garasho-dheeri, iyo wacyi sare dugsanaysa inoogu sheegayaa qolo kasta oo qaybahaa aan soo xusnay ka mid ahi waxa ay mudan tahay, abaalka loo ogyahay inta uu le'eg yahay iyo sida maanka loogu hayo, oofintiisana loogu talo jiro. Waana kan gabaygii oo hadda intan hoos ku xusan uun laga hayaa:
F.G: Inkasta oo magaca abwaanku sidii uu igu soo gaadhay aan u qoray, haddana waxa jira aqoonyahanno sheegay in abwaanka la odhan jiray Xaaji Axmed Gabay-Xaddi. Haddaba taariikh-nololeedkii abwaanka iyo murtidiisii inta maqanba waa in la raadiyaa. Waa hawl u taalla qof kasta oo suugaanta wax ka qora ama ku lug leh.
30ka May, 2005
Faafin: SomaliTalk.com | May 29, 2005